Uncategorized | Wagle Street Journal
ब्यांककदेखि नोमपेन्हसम्म: क्रान्ति, द‌ङ्गा र ठुल्दाई
‘म तपाईंलाई केही देखाउन चाहन्छु’ भन्दै ती आफ्नो मोबाइल फोन खेलाउन थाले । मोबाइलमा उनले केही तस्बिर देखाए जसमध्ये एउटामा नेपाल, ट्युनिसिया, इजिप्ट र लिबियाका झन्डाहरू थिए । तिनको मुनि प्रश्नचिन्हयुक्त एउटा रातो झन्डा थियो जसका मुनि थाईमा केही लेखिएको थियो । ‘यो प्रश्नचिन्ह भएको झन्डा थाइल्यान्डको हुन सक्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो,’ तिनले भने । इमेलमार्फत त्यो तस्बिर पठाउँदा आफू पक्रिइन सक्ने सम्भावना औंल्याउँदै उनले ब्लुटुथमार्फत त्यसलाई मेरो फोनमा पठाए । ‘तपाईंहरूले कसरी गर्नुभयो ?’ उनले फेरि सोधे, ‘क्रान्ति कसरी भयो ? राजा कसरी फाल्नुभयो ?’
This entry was posted in Uncategorized and tagged क्याम्बोडिया, थाइल्यान्ड, नोमपेन्ह, ब्यांकक on August 27, 2011 by Dinesh Wagle.
दिल्लीमा घर फेला पार्न त्यति सहज होला भन्ने मैले ठानेको थिइनँ । सहजताको जस, माथि उल्लेख भयो, सजिलो नामांकन प्रणालीलाई जान्छ जसले सहरी ठेगाना ठम्याइलाई काठमाडौंमा डान्स बार फेला पारेजत्तिकै सजिलो तुल्याइदिन्छ । युरोपेली युनियनको सहयोगमा नेपाली राजधानीमा पनि त्यस्तै ठेगाना प्रणाली स्थापित छ तर तुलनै गर्न नसकिने जनसंख्या भएको दिल्लीमा जस्तो व्यापक चलनमा त्यो काठमाडौंमा भएजस्तो लाग्दैन । Continue reading →
चरीको विलाप पढेको भए,
तिम्रो दुर्मतीले आज
मेरो घरबार उजाडिने थिएन
मेरा पातीका खम्बाहरू
तिम्रो क्रेनले उचालिने थिएन
तर तिमी सुस्ताएनौं।
मेरो तपतपे खोल्सीको पानी
मेरै कर्कलाको पातमा उठायौं
र भीमकाय सागरमा खसायौं
चिरिएको मेरो घाटी
खरिएको मेरो छाती
धन्यवाद छ तिमीलाई!
मेरो माटो पकाएर
हलुवा चै तिम्ले खाएका छैनौं
मेरा रुखका पातहरु सिएर
धोती चै तिम्ले लाएका छैनौं
अझ बेस्सरी ठेल!
दुई मिटर माथि उचालिन्छ कि?
This entry was posted in Uncategorized and tagged नेपाली समाज, सुस्ता on May 18, 2008 by Dinesh Wagle.
दार्चुलाका ग्रामिण भेगमा संविधानसभा निर्वाचनको प्रचार प्रसारका लागि एमाले र कांग्रेसको गाउं अभियान कार्यक्रम चलिरहेको थियो । अभियानमा जान दुवै पार्टीले आग्रह गरे । तर मेरो असहमती रह्यो । कारण कुनै एउटा पार्टीको एकल कार्यक्रममा जांदा फलानो पार्टीको पत्रकार रहेछ भन्ने आरोप लाग्ने डर मलाई थियो । कार्यक्रममा नजांदा केही नेता कार्यकर्ता रिसाएका थिए । संयुक्त रुपले कार्यक्रम गर्न एमाले, माओवादी र कांग्रेसका नेतालाई आग्रह गरे । तर सहमती हुन सकेन । Continue reading →